PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-12-02 - Ukuzithoba kumenze wakhula kuzalo
Ukuzithoba kumenze wakhula kuzalo
Umajozi ngaphandle kokulingisa, ubuye aphathe imicimbi
Ilanga langeSonto - 2018-12-02 - Izithombe - LUCKY CAIN
INTANDOKAZI yomlingisi, usimphiwe Majozi okhula ngesivinini emdlalweni owuchungechunge Uzalo, uthi ukuzimisela nokuhlonipha yikhona okumenza aqhubeke nokukhula kulo mdlalo ohamba phambili ngababukeli eningizimu Afrika.
Usimphiwe odlala indawo kasbu kulo mdlalo, utshele leli phephandaba ukuthi kuyamjabulisa ukuqhubeka nokukhula kulo mdlalo, kwazise esaqala ukubonakala kuwona, ebezoba wumlingisi ofika ngokubizwa kuphela.
“Uma ukhumbula ngesikhathi usaqala lo mdlalo, bengivela kancane, kuphele amasonto ngiphinde ngibonakale futhi. Ukuhlonipha, ukukhuthala nokuzimisela yikhona okwenze indawo engiyidlalayo yakhula,” kusho umajozi.
Uthi uzizwa ethobekile ngokuthi ababhali nabadidiyeli balo mdlalo bakuqaphelile ukuzimisela kwakhe, bayikhulisa indawo yakhe. Indawo kasbu kulo mdlalo kulezi zinsuku isematheni njengoba uthando lwakhe nesithandwa sakhe, ufikile (Nelisa Mchunu), luvutha amalangabi, kanjalo nobudlelwano bakhe nonkunzi (Masoja Msiza).
Unxuse abantu ukuba baqhubeke nokubuka lo mdlalo okhonjiswa KWI-SABC 1 phakathi nezinsuku, kwazise kuningi okusazokwenzeka ngendawo ayidlalayo. Ngaphandle kokuba ngumlingisi, umajozi ubuye abe ngumculi futhi abe ngumphathi wezinhlelo emicimbini eyahlukene.
Uthi ngenxa yokuba matasa ngokuqopha, uphoqeleke ukuba awumise kancane umculo ukuze agxile ekulingiseni. Uthi njengoba kuqala amaholidi kazibandlela (December), uzoba matasa ngokuphatha izinhlelo emicimbini njengoba ngomhla ka-9 kuzibandlela (December) ezobe ephethe uhlelo emcimbini omkhulu obizwa ngenanda Dam World Music Festival.
Uqhuba ngokuthi okumjabu- lisayo ngokuphatha uhlelo kulo mcimbi, wukuthi uzobe ubophele abaculi abanohlonze okubalwa kubo iladysmith Black Mambazo, u-oliver Mtukudzi, ulira, ujoe Nina, usteve Kekana, ithee Legacy, umuso Khoza, ishabalala Rhythm nabanye. [email protected]
ISITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA
USIMPHIWE Majozi uthi ukuzikhandla nokuhlonipha yikhona okumenza wakhula emdlalweni Uzalo.